OTU ESI ESI WỤNYE EGWUREGWU SITE NA DISK NA KỌMPUTA - WINDOWS - 2019
Ịwụnye egwuregwu site na disk na kọmputa
Kedu onye na-achọghị ịnwale atụmatụ nzuzo nke usoro ihe omume ahụ? Ha na-emeghe atụmatụ ndị ọhụrụ a na-akọwaghị, ọ bụ ezie na iji ha eme ihe na-anọchite anya ihe ize ndụ ụfọdụ metụtara ọnwụ nke ụfọdụ data, na ọnweghị ike nke nchọgharị. Ka anyị chọpụta ebe ntọala zoro ezo nke nchọgharị Opera.
Ma, tupu ịmalite ịkọwa ntọala ndị a, ịkwesịrị ịghọta na ihe nile ha na ha na-eme bụ ihe ize ndụ na ihe ize ndụ nke onye ọrụ ahụ, na ọrụ niile maka nsogbu ọ bụla nwere ike ịkpata ọrụ opera nchọgharị ya. Arụ ọrụ na ọrụ ndị a bụ ihe nnwale, onye mmepụta enweghịkwa ihe kpatara nsogbu ha.
Nyocha zuru ezu nke ntọala zoro ezo
Iji banye n'ime ntọala Opera ahụ zoro ezo, ịkwesịrị ịbanye okwu "opera: flags" na ebe ntanetị nke ihe nchọgharị ahụ n'enweghị ọkwa, wee pịa bọtịnụ ENTER na keyboard.
Mgbe ihe a gasịrị, anyị na-aga na ngalaba nke ọrụ nnwale. N'elu window a, ịdọ aka ná ntị sitere n'aka ndị mmepe Opera na ha enweghị ike ikwu na arụ ọrụ nke ihe nchọgharị ahụ ma ọ bụrụ na onye ọrụ jiri ọrụ ndị a. Ọ ga-eji ọrụ nlekọta nke ọma rụọ ọrụ niile na ntọala ndị a.
Ntọala onwe ha bụ ndepụta nke ọrụ ndị ọzọ nke Opera nchọgharị. Maka otutu n'ime ha, enwere usoro ato: on, gbanyụọ ma na ndabara (ọ nwere ike bụrụ ma maọbụ).
Njirimara ndi enyere na ndabara, na-arụ ọrụ ọbụna na mwube ihe nchọgharị mwube, na njirimara nkwarụ adịghị arụ ọrụ. Naanị ịmegharị ihe ndị a bụ ihe kachasị mkpa nke ntọala zoro ezo.
N'ihe ọ bụla ọrụ enwere nkọwa dị mkpirikpi n'asụsụ Bekee, yana ndepụta nke sistemụ arụ ọrụ na-akwado ya.
Otu obere ìgwè si na ndepụta nke ọrụ anaghị akwado ọrụ na Windows operating system.
Tụkwasị na nke ahụ, na windo ntinye zoro ezo, ọrụ nchọta nwere ike ịrụ ọrụ, na ike ịgbanghachite mgbanwe niile gbanwere na ntọala ndabara site na ịpị bọtịnụ pụrụ iche.
Uru ụfọdụ ọrụ
Dịka ị pụrụ ịhụ, na ntọala zoro ezo, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ. Ụfọdụ n'ime ha adịchaghị mkpa, ndị ọzọ adịghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Anyị ga-ebiri na atụmatụ kachasị mkpa ma dị mma.
Chekwaa Page dị ka MHTML - nsonye nke atụmatụ a na-enye gị ohere ịlọghachite ike ịchekwa ibe weebụ n'ime usoro nchekwa MHTML na otu faịlụ. Opera nwere ohere a mgbe ihe nchọgharị ahụ ka na-arụ ọrụ na Presto engine, ma mgbe ọ gbasịrị Blink, ọrụ a kwụsịrị. Ugbu a ọ ga-ekwe omume iweghachi ya site na ntọala zoro ezo.
Opera Turbo, version 2 - gụnyere ebe ndị na-ekpo ọkụ site na mkparịta ụka ọhụrụ algorithm, iji mee ka iwe dị elu na-agba ọsọ ma zọpụta okporo ụzọ. Ikike nke nkà na ụzụ a dị elu karịa nke ọrụ Opera Turbo nkịtị. Na mbụ, mbipute a bụ raw, ma ugbu a, ọ kwadoro, ya mere ọ bụ na ndabara.
Mbadamba akwụkwọ mpịakọta - njirimara a na-enye gị ohere itinye ọnụ ọgụgụ ntanetị dị mma karị ma kọmpat karịa ndị ibe ha dị n'usoro arụmọrụ Windows. Na nsụgharị nke Opera nchọgharị, njirimara a nwekwara ike site na ndabara.
Block mgbasa ozi - ewu na ad mgbasa. Akụkụ a na-enye gị ohere igbochi mgbasa ozi na-enweghị ịwụnye ndọtị ndị ọzọ ma ọ bụ nkwụnye ins. Na nsụgharị nsụgharị nke usoro ihe omume ahụ, ọ na-arụ ọrụ site na ndabara.
Opera VPN - ọrụ a na-enye gị ohere ịmepụta onwe gị Opera onye anonymizer, na-arụ ọrụ site na onye nnọchiteanya proxy na-enweghị wụnye mmemme ọ bụla ma ọ bụ tinye-ons. Akụkụ a dị ugbu a dị nnọọ mma, ya mere enwere nkwarụ site na ndabara.
Ozi ahaziri maka ozi mmalite - mgbe arụ ọrụ a, ụlọ ọrụ Opera na-egosiputa ozi nkeonwe maka onye ọrụ, nke a kpụrụ dịka ọdịmma ya si dị, site na iji data site na akụkọ ihe mere eme nke ibe weebụ gara. Akụkụ a ugbu a nwere nkwarụ site na ndabara.
Dịka ị pụrụ ịhụ, opera ntọala zoro ezo: ọkọlọtọ na-enye ihe ngosi dị iche iche na-adọrọ mmasị. Ma echefula banyere ihe ize ndụ ndị metụtara mgbanwe na ọnọdụ nke ọrụ nyocha.